TRANO PRINTIM-PIRENENA: Tsy miankina amin’ny orinasa ny fisian’ny bokin’omby hosoka.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire sept 12, 2017
Ny fanaovana fitombon-kase eny rehetra eny no tena mampirongatra ny hosoka. Nambaran’i Jean Angelson RANDRIAMBOAVONJY fa tokony ao amin’ny trano printim-pirenena no hanaovana izany rehefa raharaham-panjakana. Betsaka amin’ireo tomponandraikim-panjakana anefa no mandika izany. Hany ka manome vahana ireo mpanao hosoka raha amin’ity resaka ity. Porofon’izany ny bokin’omby izay misy fitombon-kasem-panjakana hosoka.
Noho izany, tokony hametraka politika ahafahana miaro ny asam-panjakana ny anivon’ny ministera misahana ny fitombon-kasem-panjakana. Nohamafisin’ny Tale Jeneraly ihany koa fa vonona hiara-hiasa amin’ny mpitandro filaminana ny orinasa amin’ny famongorana ny taratasim-panjakana hosoka.
Marihina fa vidiana ao amin’ny trano printim-pirenena avokoa rehefa taratasy ilaina amin’ny raharaham-panjakana. Ho an’ny bokin’omby izao, 65.000 Ariary ny vidiny ary azo hamarinina ao amin’ny tranokalan’ity orinasam-panjakana ity izany sy ireo vidin’entana hafa.
‹ SOLOMBAVAMBAHOAKA NICOLAS: “Tsy vahaolana akory ny fanoloana ireo ministra”.	› CCCOI 2017: La 32ème Coupe d’Afrique des Clubs Champions se tiendra à Madagascar.